Returns Policy | KarmanHealthcare.com
Inodzosera Policy & Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo
Kuti uite kudzoka kwako nemazvo sezvinobvira, ndapota tevera rairo pazasi nokungwarira. Kukundikana kutevera iyi mirairo kunogona kukonzera kunonoka mukugadzirisa kudzoka kwako kana kuti kiredhiti irambwe.
Zvisina Kudzoreka Zvigadzirwa
Zvigadzirwa zvakatengwa anopfuura mazuva makumi matatu (30) mazuva kubva musi wechikepe
Yakagadzirirwa mavhiripu, yakakosha kana tsika zvigadzirwa zvinogadzirwa kune vatengi marongero kana kutengeswa seisingadzoreke
Zvigadzirwa zvakadzoserwa mune zvakachinjika kana zvakakanganisika kurongedza, kana mune kurongedza zvimwe kunze kwepakutanga kurongedza
Pasuru uye / kana chigadzirwa chakatyoka, chakaputswa, chakakuvara kana chisingaitike mamiriro
Kudzoka kwakarambidzwa nemutemo wenyika *
Zvese zvigaro zvekugara zvinofanirwa kudzorerwa mukati memapurasitiki epakutanga akavharika
Kuburitswa kwenhamba yeRMA hakuvimbisi chikwereti. Kiredhiti kuburitswa kunoenderana nekusimbiswa risiti / ongororo uye kugamuchirwa kweRMA chigadzirwa kudzoka muKarman Inventory uye inoenderana nemamwe mazwi eiyi mutemo
* Nyika yega yega ine mitemo yega yeParamisi, kudzoka kwese kunoenderana nekutenderwa kweKarman Regulatory Affairs
Ndeipi yako inotora mutemo?
Ndokumbira kuti ubate wako wepano mupi kana mutengesi weinternet kubva kwawakatenga icho chigadzirwa cheKarman kubva kuti uone kuti mutemo wavo wekudzoka chii uye maitiro ekugadzirisa kudzoka. Kana iwe wakatenga online, iwe unogona kazhinji kuwana avo vanopa mutemo pane yavo webhusaiti. Iwe unogona kureva kune yedu Return Policy kana iwe wakatenga zvakananga kubva kuKarman Healthcare Inc.
Zvigadzirwa zvakatengwa kubva kune anotenderwa mutengesi, isu hatigone kugadzirisa kudzoka zvakananga sezvo tisina mari yako. MaRMA anongopihwa kune vatengesi vane account inoshanda neKarman Healthcare.
Short Shipment uye Freight Damage
Zvikumbiro zvekushomeka, zvikanganiso mukutakura kana zvikanganiso zvinoonekwa pane wega kuongorora zvinofanirwa kuitwa nekunyora kuna Karman mukati memashanu (5) mazuva ekarenda mushure mekugamuchira kwekutakura. Kukundikana kwemutengi kupa ziviso yakakodzera panguva imwecheteyo kunosanganisira kugamuchira zvisina kukodzera kutakura kwakadaro.
Kukuvadza kana Kuperevedza
Mukuyedza kudzikisira mukana mukunonoka kugadziriswa kwekukuvara kana kushomeka murandu, mutengi anodikanwa kuti averenge maretiiti ese vatengi vasati vatambira kutakura kubva kune anotakura. Zvakare, mushure mekugashira zvigadzirwa, kuongororwa kune pachena kukuvara kwechigadzirwa, kurongedza uye / kana kushomeka, zvinofanirwa kucherechedzwa pane mutakuri wekutakura kana bhiri yekutakura (BOL) uye kusainirwa nemutengi. Zvigadzirwa zvakakanganisika zvinofanirwa kuramba zviri mukatoni yekutanga, mune chiitiko chekuongorora chinodiwa ne kutakura Kambani.
Mutengi anofanira kuzivisa Karman nezve chero zvakakanganiswa mukufamba kana chero zvataurwa pamusoro apa mukati memazuva maviri (2) ebhizinesi mazuva ekugashira, kana Karman haazove nechisungo chekugadzirisa chikwereti kana kuronga kuchinjisa chigadzirwa. Bata mumiriri weKarman Service pa626-581-2235 kana mumiriri wekutengesa weKarman kuti ataure kukuvara kana kushomeka.
Zvigadzirwa zvinotumirwa Mukukanganisa naKarman
Mutengi anofanira kuzivisa Karman nezve chero zvikanganiso zvekutakura kana kupokana mukati memaviri (2) mazuva ebhizinesi ekugamuchira. Zvigadzirwa zvinotumirwa mukukanganisa naKarman zvinodzoserwa kuburikidza neRMA maitiro, chero zvigadzirwa zvikagashirwa mukati memakumi matatu (30) mazuva ekugashira
RMA (Inodzosera Merchandise Mvumo), Mari Yechirongwa, & Maitiro
Dzosera mvumo inofanirwa kuwanikwa pamberi paKarman. Hapana kudzoka kwemhando ipi neipi kunozogamuchirwa mushure memazuva gumi nemana (14) ezuva rekarenda kubva pazuva reinvoice uye kutumirwa kumashure mukati memazuva makumi matatu anotumirwa mitero yakabhadharwa. Midziyo inogamuchirwa yechikwereti pakudzoka ichaiswa pasi pegumi neshanu pakubata / kudzoreredza mutero uye zvese kutakura mhosva dzinofanirwa kubhadharwa kare.
Zvekurairwa kuri kudzoserwa kuchinjana muvara, saizi, nezvimwewo mari yekudzoreredza ichadzikiswa kusvika pa10%. Chero kudzoka shure kwaizvozvo kuchave nyaya ne base base zvichienderana nechigadzirwa, mamiriro, uye zvichitemerwa pamubhadharo kubva pa25-50% yekudzosazve mari, pamwe neinosvika madhora makumi maviri nemashanu ekugadzirisa.
tsika-zvigadzirwa zvinhu hazvisi pasi pekudzoka chero zvodini. Hapana mamiriro ezvinhu kuti zvinhu zvinodzoserwa usati watanga kuwana iyo RMA (Yakadzoserwa Merchandise Mvumo) nhamba. Dzosera mvumo nhamba inofanira kumakwa kunze kwebhokisi uye kutumira kuKarman. Mari dzese dzekutakura kusanganisira nzira yekutanga kubva kuKarman kuenda kune vatengi haizopihwe kana kudzoserwa.
Karman achakwereta chero mutero wekutakura uye / kana wekubata pamutero wepakutanga wakabhadharwa nemutengi pazvidzosera zvinokonzerwa nekanganiso yeKarman Healthcare, uye kana zvinhu zvese zviri muinvoice zviri kudzoserwa.